शैक्षिक खबर – Page6– rastriyakhabar.com
मङ्लबार, कार्तिक २६, २०७६ मा प्रकाशित
विश्यव्यापी रुपमा नै अहिले महिलामाथि हुने योनजन्य सिंहाका घटना बढ्दै गइरहेको छ । बलात्कार, हत्या र सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका घटना बढ्दै गइरहेको देखेर ९ क्लासमा पढ्ने एक विद्यार्थीले महिलाको सुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रविधिको आबिस्कार गरेका छन् । भारतको बिलासपुर बस्ने कृष्टि जर्ज एन्थोनीले..
भूमि मिचेको भन्दै भारत र चीनविरुद्ध प्रदर्शन
सोमवार, कार्तिक २५, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताले भारत र चीनले मिचेको भूमि फिर्ताको माग राख्दै केही दिन यता आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । उनीहरुले भारत र चीनले मिचेको सीमा विवाद समाधान लागि तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अनेरास्ववियूको..
शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि ७५ करोड
काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मेडिकल शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ७५ करोड रकम छुट्याइएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यक्रममा ७५ करोड विनियोजन गरेको बताए । मन्त्रालयमा बिहीबार राष्ट्रिय..
काठमाडौँ । सरकारले छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दर घटाउन सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुःक स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिकोे छलफलबाट ७५३..
सोमवार, कार्तिक ११, २०७६ मा प्रकाशित
जाजरकोट । भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित त्रिवेणी सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षा सम्म पठनपाठन हुन्छ तर मावि तह (९–१०) मा एउटा पनि शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर १० बर्ष देखि पठनपाठन भइरहेको छ । निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई निकै भार परिरहेको छ ।..
शुक्रबार, कार्तिक ८, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपालमा हाडनाता सम्बन्धमा विवाह चल्दैन । कानूनअनुसार यदी विवाह भयो भने पनि स्वतः बदर हुन्छ । तर अवसर र फाइदाका लागि मानिसहरु कुन हदसम्म गिर्छन् भन्ने हालै सार्वजनि एउटा समाचारले पुष्टि गरेको छ । हालै एक परिवारले छोरीलाई अष्ट्रेलिया पठाउन भाइसँगै विवाह गरिदिएका छन् । घटना भारतको हो ।..
त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा तालाबन्दी
काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनले वरिष्ठ प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासन विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै उपकुलपतिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई दुई संस्थाको प्रमुख बनाउन नहुने तथा विभागमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै..
पढेको कुरा कसरी सम्झिने ? हेर्नुहोस् १० सुत्र
आइतवार, कार्तिक ३, २०७६ मा प्रकाशित
पढ्नुपर्ने कुरा निकै धेरै, परीक्षाहलभित्र छिरेपछिको वातावरण तथा छोटो समयमा धेरै कुरा लेख्नुपर्ने कारणले गर्दा पढेको वा जानेको कुरा समेत परीक्षा हल भित्र छिरेपछि भुसुक्कै बिर्सने वा लेख्न नसक्ने समस्या धेरैको हुन्छ। चाहे जुनसुकै उमेरका विद्यार्थी किन नहोउन् यो समस्या देखिएकै हुन्छ । यहीँ भुल्ने..
यी हुन् परीक्षामा पास गराइदिने लालच दिएर यौ’नसम्बन्ध राख्न लगाउने शिक्षिका !
शनिबार, कार्तिक २, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । के हुन्छ जब शिक्षक वा शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास हुनको लागि आफुसाग यौ नसम्बन्ध राख्न अनुरोध गर्छन ? यस्तै, सनसनीपुर्ण काण्ड बजारमा आएको छ । यस घटनामा संलग्न महिला कलेजकी प्राध्यापकलाई मद्रास उच्च अदालतले पक्राउ गरेको ११ महिना पछि उनीलाई सशर्त जमानत दिएको छ । न्यायाधीश एन..
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई मेडिकल शिक्षाको आफूखुशी वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । अनेरास्ववियुले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या तथा ऐन कार्यान्वयनको सवाल’ विषयको अन्तरक्रियामा उनले..
को बन्ला त्रिवि उपकुलपति ? यी तीन जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिकोलागि तीन जनाको नाम सिफारीस भएको छ । त्रिविको उपकुलपतिको लागि गठित नाम सिफारीस समितिले डाक्टर भगवान कोइरालासहित तीन जनाको नाम सिफारीस गरेको हो । सिफारीस तीन जनामा डाक्टर कोइरालासहित डाक्टर धर्मकान्त्र बास्कोटा र डाक्टर चन्द्रमणि कोइराला रहेका छन् ।..
सीएमसीका मेडिकल विद्यार्थी र अभिभावक फेरि आन्दोलित
मङ्लबार, अशोज १४, २०७६ मा प्रकाशित
मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै शुल्क फिर्ताका लागि विद्यार्थीहरु भदौदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । विद्यार्थीको आन्दोलन पछि सरकारले मेडिकल कलेजलाई बढी लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यलय चितवनले..
बालविकासका शिक्षिकाहरु तीन दिनदेखि धर्नामा
कञ्चनपुर । कञ्चनपरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकासका शिक्षिकाहरु तलब वृद्धिको माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । तीन दिनदेखि बालविकासका शिक्षिकाहरू आफूहरूले राखेका माग पूरा गर्नका लागि दबाब दिन भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा धर्नामा बसेका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सरकारी..
महांलक्ष्मी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण
आइतवार, अशोज १२, २०७६ मा प्रकाशित
नुवाकोट । नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नं १ कागतीगाऊँ मंगटाटोलका महांलक्ष्मी आधारभुत विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । शनिबार किवानिस क्लव अफ कान्तिपुर काठमाडौंले शैक्षिक सामाग्रीहरु (स्कुल व्याग, कापी, कलम) तथा हिमाल अस्पतालका चिकित्सकहरुबाट..
विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको रकम फिर्ता नगरे अनशन वस्ने डा केसीको चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । डा केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त भइसकेकाले अब आयोगको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निजी..